रक्सी पिउने समय तोकियो - Aarthiknews
शुक्रबार, १० माघ २०७६ Friday, 24 January, 2020
रक्सी पिउने समय तोकियो
जाजरकोट । मदिरा सेवनबाट अशान्ति र अमर्यादित कार्य भएको भन्दै नलगाड नगरपालिकाले यसको सेवन गर्ने समय तोकेको छ । नगरपालिकाका १३ नमूना बस्तीमा छ महीनाभित्र पूर्णरूपमा मदिरा निषेध गर्ने र अन्य ठाउँमा नगरपालिकाले तोकेको समयमा मात्र सेवन गर्न उर्दी जारी गरेको छ । नगरपालिकाको पाँचौँ नगरसभाबाट नमूना बस्तीबाहेक अन्य ठाउँमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कात्तिक मसान्तसम्म बेलुका ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्र मदिरा सेवन गर्न पाइने निर्णय गरिएको छ ।
किन दिए निगमका २५ पाइलटको सामूहिक राजीनामा ?
सुनको मूल्य आज पनि बढ्यो, यस्तो छ बजार भाउ
एकै परिवारका सात छोराछोरी सुरक्षा फौजमाः आमा बुबा सम्मानित
भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल विश्वको कति औँ स्थानमा ?
ट्रम्पको नयाँ नीति : गर्भवती महिलालाई अमेरिका प्रवेशमा रोक
लगानीकर्ताको नाममा २६ करोड जम्मा
एनआइसी बैंकले एपीएफका खेलाडीलाई दियो ९ लाख ९५ हजार
२० लाख पर्यटक भित्र्याउन उद्घाटनमै ३ करोड खर्च
बागमती प्रदेशमा भोलि सार्वजनिक बिदा (सूचनासहित)
एन्फा अध्यक्षलाई कुट्ने सांसद मनाङ्गे पक्राउ
भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी महानगरले दियो फ्रि वाइफाइ
नेप्से घट्ने क्रम आज पनि जारी, सबै सूचक राताम्मे